मनिका झा/राजकरण महतो
जनकपुरधाम : सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ आउने भनिएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
यसका लागि पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग समेत गरिएको छ । महोत्सवमा आदित्यनाथ भगवान रामको जन्तीको प्रतिनिधित्व गर्दै जनकपुर आउने भएका हुन् ।
विवाह पञ्चमीमा लाखौंको संख्यामा श्रद्धालु आउने अपेक्षा गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ड्रोन क्यामराबाट निगरानी सँगै अत्याधुनिक र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम (आरसीएस) को समेत प्रयोग गर्न लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आरसीएस प्रविधि अहिले नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने नयाँ प्रविधिहरुमध्येकै एक हो । यसमा उपयोग गरिने भिडियो सेटले क्यामराको माध्यमबाट सुरक्षा अवस्थाको गतिविधिबारे कन्ट्रोल रुमसम्म जानकारी पुर्याउँछ ।
सोमबार बारहबिघा रंगभूमि मैदानमा नेपाल प्रहरीले विशेष क्षमता भएको दुुईवटा ड्रोेन क्यामराको परिक्षण गरी त्यसको माध्यमबाट सुरक्षा अवस्थाको जानकारी लिने तयारी गरेको थियो । यस्तै आरसीएस प्रविधि प्रयोगको लागि समेत परिक्षण गरिएको प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डिआईजी हरि बहादुर पालले जानकारी दिएका छन् ।
सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउन विवाह कार्यक्रमको एक दिनअघि मंगलबार देखि नै ड्रोन क्यामरा र आरसीएसको प्रयोग थालिने डिआईजी पालले बताए ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु प्रदेश प्रहरी कार्यालयमै बसेर आरसीएस प्रविधिको प्रयोग गरी सम्पूर्ण जानकारी लिइराख्ने तयारी गरिएको डिआईजी पाल बताउँछन् । महोत्सवमा सम्भावित आपराधिक गतिविधि रोक्न ३ हजारको संख्यामा नेपाल प्रहरी, १ हजार सशस्त्र प्रहरी र सयजना भन्दा बढी सादा पोसाकका प्रहरीहरु खटाइएका छन् ।
सवारी साधनको चाप बढेपछि मंगलबारदेखि नगरक्षेत्रमा ठूला सवारी साधनलाई नगर बाहिरै पार्किङको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नगरक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चारवटा मार्गमा ठूला क्षमताका गाडी रोकिने छ भने नगरभित्रका गाडीहरुलाई पनि मन्दिर क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाइने तयारी गरिएको मध्य क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका एसपी किरण बज्राचार्यले जानकारी गराएकी छन् ।
बुलेटप्रुफ गाडी र भारतीय सेना पनि
आदित्यनाथ बुधबार आउनुअघि नै भारतबाट बुलेटप्रुफ गाडी जनकपुर ल्याइएको छ । यसबाहकेक ज्यामर सहित सातवटा अन्य गाडी पनि उनको सुरक्षाका लागि भित्र्याइएको छ ।
सुरक्षा प्रयोजनका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु पनि जनकपुर आइसकेको डिआईजी पालले जानकारी गराए । भारतीय दूतावासका डिसिएम डा. अजय कुमारका अनुसार मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ बुधबार भारतको लखनऊबाट विशेष विमानबाट जनकपुर विमानस्थल आउने छन् ।
त्यहाँबाट उनी सोझै जानकी मन्दिरमा पूजा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । पूजा सकिएपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ओजना गरेको दिवाभोजमा सहभागी हुन आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री निवास मधेस भवन पुग्ने छन् । दिवाभोज सकिएपछि उनी बारहबिघा मैदानमा आयोजना हुने सीताराम स्वयम्वरमा सहभागी हुने बताइएको छ ।
राजधानीमा सडक छेकेर विप्लवको शक्ति प्रदर्शन(फोटो फिचर)
प्रदेश मन्त्री केशव स्थापित पदमुक्त
बलाधिकृत थापाले बिहीबारदेखि कमाण्ड सम्हाल्दै
मन्त्रिपरिषद् बैठक चिनीको समस्या समाधान गर्न कार्यदल
कामु प्रधानसेनापतिको कार्यभार बलाधिकृत रथी थापालाई, जङ्गी अड्डाबाट क्षेत्रीको बिदाई
अब खाडीका राम्रा कम्पनीमा मात्रै नेपाली कामदार !
ठूलाको पछि लाग्दा सार्कको दुर्दशा
नेपालमा सीख धर्म : अठाह्रौँ–बीसौँ शताब्दीमा
नेकपाको सचिवालयक बैठक आज
वैदेशिक रोजगार विभागका २५ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
नियम मिचेर मुद्दा : लापरवाही भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा छानविन
यसरी बाहिरियो एसइई प्रश्न�...
प्रदेश २ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (ए
नेपाल-भारत इनर्जी एक्सचेन�...
नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा बिजुली ब�